Taageerayaasha Leicester City iyo Booliska Madrid oo dagaalamay +Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Taageerayaasha Leicester City iyo Booliska Madrid oo dagaalamay +Sawiro
Taageerayaasha kooxda Leicester City iyo ciidamada Booliiska magaalada Madrid ayay dhex mareen iska hor imaadyo iyo shaqaaqo loo maaro waayay, ka hor kulankii xalay ee Champions League ay kaga hortagaysay kooxda Ingiriiska ahi, naadiga Atletico Madrid.
Walxo kala duwan ayay gannayeen taageerayaashu, oo ay ku tuurayeen booliiska, iyadoo ciidankuna ay adeegsanayeen, suntan dadka ka ilmaysiisa, waxaana la xaqiijiyey in tiro taageerayaal ah dhaawacyo soo gaadheen.
Wariyaha idaacada BBC da ee Phil Mackie ayaa cadeeyey in ciidamada booliisku ay adeegsanayeen, rasaasta rabadhka ah, si ay u kala dareeriyaan, taageerayaasha kacsan ee badhtamaha suuqa isugu soo urruray.
Maalinimadii hore, ciidamada Booliiska wadanka Spain ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen, siddeed ruux oo kamid ah taageerayaasha kooxda Leicester kuwaas oo xaalad abuur sameeyey habeenimadii Salaasada.
Muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada, oo laga qaaday shaarica Plaza Mayor, halkaas oo ay taageerayaasha Leicester ay hore u iclaamiyeen inay tahay bar kulanka ay isku urrursan doonaan, ayaa muujinayay, koox ciidamada Booliiska kamid ah oo ay bartilmaameedsanayaan taageerayaal qaylinaya.
Qof goob jooge ah ayaa u sheegay Barnaamijka BBC 5 Live: “Waxaa goobta ku sugnaa dad badan oo dhab ahaan ahaa kuwo u isu soo urursaday inay booliiska la dagaalamaan, laakiin dhamaantood meesha waa laga saaray.
“Dadka goobta ku sugnaa, xataa carruur ayaa ku jirtay, goobta waxay la yimaadeen quraarado madhan iyo walxo kale oo ay u adeegsanayeen fadqalaladooda, waxaa isna meesha ku sugnaa oday weyn oo ilaa 70 jir ah oo dhalinyaro wata.”